Manana namako iray izay mamolavola sy mandoko ny rindrina amin'ny rindrina ary manao asa mahatalanjona. Na dia fampiasam-bola tsy mampino aza ity zavakanto ity izay afaka manova ny sehatr'asa na ny toerana fivarotana, ny fahaizana mandrafitra sy mandoko sary marindrano amin'ny toerana mitsangana dia navela hamehezana ny fametrahana na ny mpanakanto. Nipoitra ny teknolojia fanontana vaovao izay hanova izany, na dia… mpanonta rindrina mitsangana.
Ny teknolojia fanontam-pirinty farany avoakan'ny Wall Printer dia mamela ny sary hosodoko elektronika misy sary, sary, sary hosodoko na sary an-tsoratra amin'ny sehatra anatiny na ivelany. Ny masin'izy ireo dia natao hanonta amin'ny faritra maro, toy ny plaster, sheetrock, vera, vy, biriky, beton, vinyl ary hazo.